Ahlusunna oo sheegtay inay u diyaar garowday Dagaal | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ahlusunna oo sheegtay inay u diyaar garowday Dagaal
Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal Xoghayaha Gaashaandhiga maamulka Ahlusunnada Koofureed ayaa ka dhawaajiyay in ay u diyaar garoobeen dagaal ay la galaan Xarakada Al Shabaab oo dagaal kala soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM ee kaabaya.
Xoghayaha Gaashaandhiga ee Ahlusunna Koofureed ayaa ku nuux nuuxsaday in ay diyaariyeen Ciidamo Cusub oo Ahlusunna Waljamaaca ka tirsan islamarkaana intooda badan ay ku sugan deegaanada maamulka Jubbaland ayna isu diyaariyeen dagaal ka dhan ah Al Shabaab.
Sidoo kale Sheekh Isxaaq Mursal ayaa ka dhawaajiyay in ay ka dambeysay qorshahooda dagaal kadib markii dowladda Federaalka Soomaliya ay ka gaabisay doorkii kaga aadanaa howlgalkaasi ayna ku Mashquushay Arrimaha Doorashooyinka.
Ahlusunna Koofureed ayaa waxaa kale ay Cadeysay in aysan aqoonsaneen maamulka Jubbaland oo ka mid ah maamul Goboleedyada dalka.
Waxaana ay ka dhawaajiyeen in ay doonayaan in maamul Cusub ay ka sameeyaan Gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, maamulkaas oo uu sheegay in lagu dhisayo rabitaanka dadka deegaanka.
Ugu dambeyn Masuulkaan u hadlay Ahlusunna Koofureed ayaa baaq Nabadeed waxa uu u jeediyay maamullada Puntland iyo Galmudug oo iyagu ku dagaalamaya Magaalada Gaalkacyo.